Izindatshana ZikaCaroline Black on Martech Zone |
Imibhalo nge UCaroline Mnyama
UCaroline ungumbhali nomkhangisi wokuqukethwe we Ukucabanga Okuphephile. Ochwepheshe bezokuphepha kwe-inthanethi, uyazi ngomonakalo ongenziwa yi-malware emikhankasweni yakho eku-inthanethi. Unolwazi ngezinsongo eziku-inthanethi kanye namandla okuba kubaduni ukuduna amawebhusayithi namasu wokukhuthaza. Njengomakadebona ongumakadebona, uzimisele ukuhlanganyela nakho nabantu abanomqondo ofanayo ukwenza i-intanethi indawo ephephe kakhudlwana.
NgoMsombuluko, Disemba 5, 2016 UCaroline Mnyama
Unyaka olandelayo kubhekwe ukuthi ube unyaka othokozisayo wokukhangisa nge-digital, nezinguquko ezingenakubalwa zokuphayona kubuso be-inthanethi. I-Intanethi Yezinto kanye nokuya kokungokoqobo okubonakalayo kubanga amandla amasha wokumaketha online, futhi izinto ezintsha ezintsha kwisoftware zihlala zisesimweni esiphakathi nendawo. Ngeshwa, noma kunjalo, akuyona yonke le ntuthuko enhle. Labo bethu abasebenza ku-inthanethi bahlala bebhekana nengozi yezigebengu ze-cyber, ezithola ngokungakhathali izindlela ezintsha zokuzithola